Aubameyang oo ka soo laabtay ganaaxii uu ku riday tababarihiisa isla markaana dhaliyay goolkiisii ugu dhaqsiyaha badnaa iyo kuwa kaloo badan…. – Gool FM
Aubameyang oo ka soo laabtay ganaaxii uu ku riday tababarihiisa isla markaana dhaliyay goolkiisii ugu dhaqsiyaha badnaa iyo kuwa kaloo badan….
(Germany) 05 Nof 2016. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dib ugu soo laabtay safka hore ee kooxdiisa Borussia Dortmund isagoona dhaliyay goolkiisii ugu dhaqsiyaha badnaa ebid ee horyaalka Bundesliga.
Aubameyang ayaa laga soo tagay shaxdii Dortmund ee guusha ka gaartay Sporting kulan ka tirsanaa Champions League sababo la xiriira arimo gudaha ah, iyadoo ay wararka qaar soo jeediyeen in laacibka lagu ganaaxay maadaama uu xaflad u aaday Talyaaniga ogolaansho la’aan.
Haseyeeshee, waxaa lagu soo daray shaxda kooxdiisa ee iminka la ciyaareysa kooxda Hamburg horyaalka Jarmalka wuxuuna durba dhaliyay goolkiisii ugu dhaqsiyaha badnaa iyo waliba kuwa kaloo badan.
Ciyaarta ayaa iminkia soconeysa daqiiqada 66-aad waana 4-1, waxaana dhammaan goolasha Dortmund dhaliyay Aubameyang oo uu ka mid yahay kiisii ugu dhaqsiyaha badnaa horyaalka wuxuu dhaliyay daqiiqadii 4-aad, goolkii hore ee ugu dhaqsiyaha badnaa wuxuu dhaliyay daqiiqada 8-aad.
Macallin Zinedine Zidane oo soo saaray liiska kooxdiisa Real Madrid ee kulanka Leganes… (Karim Benzema oo maqan iyo Luka Modric oo soo laabtay)